Soomaaliya oo Denmark kala hadashay xaaladda Baladweyne | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Soomaaliya oo Denmark kala hadashay xaaladda Baladweyne
Soomaaliya oo Denmark kala hadashay xaaladda Baladweyne
Wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa Magaalada Addis Ababa ee Dalka Itoobiya uga qeybgalay shir ku saabsan fulinta meel marinta heshiiskii Adduunka ee arrimaha Qaxootiga oo ay so qaban qaabisay hay’adda Aduunka u qabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Wasiir ku xigeenka iyo hay’adda Qaxootiga Adduunka ee UNHCR ayaa waxay ka wada hadleen xaaladaha ka taagan Dalka Soomaaliya oo ay ugu horreyso wax ka qabashada fatahaadaha Wabiyada Shabeele Iyo Jubba.
Dhinaca kale , Wasiir ayaa isla Xalay kulan deg-deg ah kula qaatay Magaalada Addis ababa Wasiir ku xigeenka siyaasadda iyo horumarinta Dalka Denmark, Stephan Schoneman, shirkaas oo looga hadlayay xaaladaha Bini’aaddannimo ee ka taagan Gobolka Hiiraan gaar ahaan Magaalada Baladweyne.
Kulanka ayaa layskula soo qaday sidii looga hortagi lahaa in ay soo laabato xaalad la mid ah midda haatan ka taagan Baladweyne iyo sidii ay Dadkaasi u heli lahayeen gurmad deg-deg ah.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa ballan qaaday in ay ka Dowlad ahaan Gacan buuxda ka geystaan sidii loogu gurman lahaa Shacabka ku dhibaateysan Magaalada Baladweyne iyo nawaaxigeeda,
Previous articleGuddiga Dhaqaalaha Wadajirka Ah Ee Turkiga Iyo Soomaaliya Oo Yeeshay Kulan-koodii Labaad
Next articleYugaandha oo qorsheynaysa in ay Ciidamo hor leh usoo dirto Soomaaliya